भरतपुरमा जालझेल, ७३३ को खेल !
Homerajnitiभरतपुरमा जालझेल, ७३३ को खेल !
aparadhkhabar.com 10:26 PM
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरका विषयमा गरेको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
तर, अदालतको आदेश मान्ने बताएका छन् । पहिलो चरणमा भएको चुनावमा मतपत्र च्यातेपछि भरतपुर विवादमा तानिएको थियो । भरतपुरमा जालझेल भएको भन्दै एमाले कार्यकर्ताहरू दुखी छन् । तर नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता भने खुसी छन् ।
१९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातिएको थियो। त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो। यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेद्वार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो । १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो। आइतबार राति १२ बजेसम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन ।